Madaxweyii hore ee Soomaaliya oo Muqadishu lagu soo dhaweeyay – Somali Sounds
Madaxweyii hore ee Soomaaliya oo Muqadishu lagu soo dhaweeyay
April 25, 2019 April 25, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya SheekhShariif ahna Hoggaamiyaha Xisbiga Himilo Qaran ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Shariif ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Wasiirka Amniga Qaranka, Xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo mas’uuliyiin kale oo aad u fara badan
Hogaamiyaha xisbiga Himilo Qaran Shariif ayaa loo galbiyay guriga uu ka degan yahay Muqdisho.
Imaanshaha madaxweyne Shariif ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay si aad ah loo hadal hayay, waxaana magaalada Muqdisho ka socday qaban qaabo lagu soo dhoweynayo.
Wararka nasoo gaaray ayaa sheegaya in maalinta Sabtida uu ka qeyb geli doono Munaasabad uu Xisbiga Himilo Qaran ku yeelanayaan Muqdisho.
Ayadoo dhanka kale laga yaabo in gudoomiyihii hore’ ee baarlamaanka soomaaliya Mohamed sheekh cusmaan jawaari loo magacaabayo Gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran
Dag dag: Daafaca Arsenal Sokratis oo seegaya labada kulan ee soo aadan ee Kooxda Arsenal.
Daafaca dalka Greece Sokratis ayaa seegi doona labada kulan ee soo aaddan horyaalka dalka Ingiriiska…
Gudoomiyaha Bank Dhexe ee Soomaaliya C/raxman Cabdullahi maxaa lagu dhaliilay?
Gudoomiyaha Bank Dhexe ee Soomaaliya C/raxmaan C/laahi ayaa waxaa durba soo baxaya shaki fara badan…
Banaanbax Looga Soo horjeedo Dowlada Soomaaliya iyo Dowlada Qatar oo London ka dhacay
Banaanbax looga soo horjeedo Dowlada Federalka Soomaaliya iyo dowlada Qatar ayaa ka dhacay Magaalada London…
Dowlada Federalka Soomaaliya fasaxday Duulimaadyadii Rayidka ee magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo.
September 29, 2019 September 30, 2019 Somali Sounds.com
Dowladda Federaalka ah Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay fasaxday duulimaadyadii Kismaayo, kaddib markii todobaadkii hore ay xayiraad saartay. Wasiir kuxigeenka Warfaafinta Aadan Isaaq Cali oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in dowladdu fasaxday duulimaadyadii rayidka ahaa, kaddib codsi uga yimid shacabka reer Kismaayo sida uu yiri. “Kaddib codsi uga yimid shacabka […]
Waa maxay Coronavirus?
March 17, 2020 March 17, 2020 Somali Sounds.com
Waa nooc ka mid ah viruska oo leh qaabka koofida boqorada ay xirtaan (Crown), viruskan wuxuu qeyb ka yahay noocyo virisyo ah oo keena hergebka aan naqaano iyo xanuun daran oo waxyeeleeya hawo mareenada (respiratory track). Virusku waa noole aysan isheenu qaban karin, laakiin lagu arki karo electromicrosocope. Waxaa xanuunkan hada faafaya la ogaadey 29 […]
Garoowe Oo Kulmisay Gud.Mursal iyo Madxweyne Maamulka Goboledka Puntland.
July 30, 2019 July 30, 2019 Mogadishu
Madaxweynaha maamul Goboledka Goboledka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo Madaxweyne Ku xigeenka Dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa caawa guriga uu Garoowe ka deganyahay ku booqday Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Shiikh. Kulanka waxaa goobjoog ahaa Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, Wasiirka Maaliyadda Puntland iyo Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada maamul Goboleedka Puntland. […]
Machadka Boostada oo Dadkii Daganaa laga Saarayo
Hoolka SYL oo uu kasocdo Shirka Ansaxinta xeerka Xisbiga Himilo Qaran.